रोचक::Nepal's Digital Paper
बाल बच्चालाई फोन चलाउन दिनुहुन्छ ? यदि हो भने आजै देखि जोगिनुहोस हुन सक्छ यस्तो सम्म (पढ्नुहोस)
अहिलेका बालबालिकाले मोवाइल एवं ग्याजेट्स भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । आमाबुवाले चाहेर वा नचाहेर उनीहरुलाई रोकटोक गरिरहेका हुँदैनन् । कतिपय आमाबुवाले त छोराछोरी भुलाउन, फकाउन पनि स्मार्टफोन दिने गर्छन् । जबकी यसको असर भने निकै...
काठमाडौं । मानिसले कुकुरको पिसाब पिउने कुरा कसैलाई पनि विश्वाश नलाग्न सक्छ ।तर एक अमेरिकी महिलाले दैनिक रुपमा कुकुरको पिसाब पिउने गरेकी छिन् । उनी हुन् लीन ल्यू । कुकुरको पिसाब पिउनाले अनुहारमा दाग...
प्रकृति साँच्चिकै आश्चर्यजनक छ । यसको एउटा आश्चर्य हेर्न क्यानडाको म्यानिटोबा जानुपर्दछ । जहाँ हरेक वर्ष झण्डै ७० हजार सर्प जम्मा हुन्छन् । हजारौं सर्पहरु एकठाउँमा जम्मा हुने यो कार्यलाई मानिसहरु सर्पको मेला पनि भन्दछन्...
कोही मानिसका आकांक्षाहरु विचित्रकै हुन्छन् । अहिले एकजना ४९ वर्षकी महिलाको बिहेको कहानी निकै चर्चित बनेको छ ।पूर्व स्विमसूट मोडेल एलिजाबेथ होडले आफ्नै कुकुरसँग बिहे गरेकी छिन् । उनको कुकुर लोग्नेको उमेर ६ वर्षको...
साउन १६, २०७६ / ज्योतिष शास्त्र अनुसार शरीका विभिन्न अंग फरफराउँदा राम्रो र नराम्रो योग उत्पन्न हुन्छ । त्यसका कारण तपाईको जीवनमा कुनै काम बन्ने र कुनै काम विग्रने वा लाभ हानी हुने हुन्छ...
कहिलेकाहिँ रिस उठ्नु सामान्य हो । भलै, रिसले फाइदाभन्दा हानि नै ज्यादा गर्छ । खासमा रिस उठ्छचाहिँ किन त ?वैज्ञानिकहरुको भनाइमा रिस हाम्रो भावनालाई व्यक्त गर्ने एक माध्यम हो । जतिबेला हामी कुनै समस्यामा...
काठमाडौँ – आज साउन १५ गते अर्थात खीर खाने दिन । मुलुकका विभिन्न स्थानमा यस दिनलाई विशेष महत्वका रुपमा खीर खाएर मनाइने गरिन्छ ।विशेष परिकारका रूपमा पकाइने गरिएको खीरलाई स्वादिष्ट एवम् स्वास्थ्यवर्दक खानाको रूपमा...
काठमाडौँ । पाद्नु भन्ने शब्द सुन्दा कताकता लाज लागे पनि यो संसारमा सबैले पाद्छन् नै। तैपनि सार्वजनिक स्थलमा पाद्नु असभ्यताकै प्रतीक मानिन्छ। यद्यपि पाद्नुका थुप्रै आश्चर्यजनक फाइदा हुन्छन्। १. पाद्नु ठूलो आन्द्राका लागि धेरै...
आफ्नो श्रीमतीको औंला हेरेरै थाहा पाउनुहोस आफुलाई कति माया गर्छ ?
एजेन्सी – हुन त कुन युवतीले कति प्रेमी बनाउँछन् त्यो उनिहरुको स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो । शारीरिक बनावट र देखावटी रुपले होइन ।तर, समुन्दशास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार युवतीको शरीरका अंग अनुसार पनि उनीहरुको...
जानिराखौ ; महिलाहरु कस्ता पुरुषहरुप्रति बढी आकर्षित हुन्छन त ?
विपरीत लिंगीहरूप्रति आकर्षण हुनु प्राकृतिक कुरा हो । लगभग सबैजसो प्राणीलाई प्रकृतिले यो नियमको परिधीमा बाँधेको छ । तर, जब छनोटको अवसर प्राप्त हुन्छ। विपरीत लिंगीबीचमा पनि कस्तोचाहिँ चाहने भन्ने कुरा हरेकमा फरक हुन्छ...